राप्ती समाज जापानले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल र सशक्त बनाउन प्रवद्र्धनात्मक अभियानको थालनी गरेको छ । अध्ययन, पेशा र व्यवसायमा जापानमा रहेका राप्तीबासीहरुले बढी भन्दा बढी जापानी नेपाल भित्र्याउने उद्देश्यका साथ जापानको मुख्य सहर टोकियो, व्यस्त स्टेशन शिनागावा र ओमोरीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भ्रमण वर्षको लोगो अंकित टिसर्ट प्रर्दशन गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूकेको आयोजना तथा गैरआवासीय नेपाली संघ इंग्ल्याण्ड राज्य परिषदको संयोजकत्वमा अल्डरशटस्थित एम्पायर हलमा विषेश अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेमराज शर्मा, सल्लाहकार विश्वआदर्श पण्डित, एनआरएनए यूकेकी अध्यक्ष पुनम गुरुङ्ग, आइसीसी सदस्यहरु, मानार्थ सदस्यहरु, पूर्वअध्यक्षहरु, भूपु गोर्खाहरु, पत्रकार लगायत बेलायतस्थित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको विशेष उपस्थितिमा नेपालमा गैरआवासीय नेपालीहरुको सम्पत्तिको अधिकार विषयमा छलफल सम्पन्न भएको हो ।
रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा जापान आई बसोबास गर्ने नेपालीहरुको संख्यामा वृद्धि भई ८८ हजार ९ सय ५१ पुगेको छ । रोजगारी, व्यवसाय र अध्ययनका लागि उपयुक्त देखिएपछि नेपालीको प्रमुख रोजाइको गन्तव्य देश जापान हुँदै गएको हो । जापानको न्याय मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालीहरुको बसोबास जापानको ४७ वटै प्रिफेक्चरमा रहेको पाइएको छ । जापानको ४७ वटै प्रिफेक्चरमा नेपालीहरु बसोबास गरेको पाइन्छ । सबैभन्दा बढी राजधानी टोकियोमा र कम तोत्तोरी प्रिफेक्चरमा बसोबास गरेको जापानको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । टोकियोमा २७ हजार ५ सय ९८ जना नेपालीहरु बसोबास गर्दै आएका छन् । यो संख्या जापानमा रहेका नेपालीहरुको करिब एक तिहाइ हो ।
बेलायतस्थित नेपाली समुदायतले गैरआवासीय नेपालीहरुसँग सम्बन्धीथ ऐन तथा कानुनहरु तत्काल संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ इंग्ल्याण्ड राज्य परिषदको आयोजनामा आइतबार अल्डरशटस्थित एम्पायर हलमा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले समयनाकूल विदेशमा बस्ने नेपालीहरुसँग सम्बन्धि ऐनकानुन संसोधन गर्न संघीय संसदको ध्यानार्कषण गराएका हुन् ।
एनआरएनए पदाधिकारीद्वारा श्रममन्त्रीसँग भेट
गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार विभागका सभापति डा. बद्री केसी लगायतका पदाधिकारीहरुले नवनियुक्त श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वरराय यादवसँग भेटघाट गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको छवि सुधार्ने महासचिवको प्रतिबद्धता
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का महासचिव डा. हेमराज शर्माले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा कुनै परिवर्तन नआए अर्को पटक नेतृत्वको चुनावी मैदानमा आफू नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले गैरआवासीय नेपाली संघसँग सिधा संवाद कार्यक्रम मार्फत् शनिवार यस्तो प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
पोर्चुगलमा आठ दिनमा तीन नेपालीको मृत्यु
पोखरा घर भएका ४७ वर्षीय तोरणबहादुर थापाको पोर्चुगलस्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा निधन भएको छ । थापाको हृदयघातका कारण निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
एनआरएनएद्वारा आईसीसी र मानार्थ सदस्य मनोनित
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आइसीसी सदस्य र मानार्थ सदस्य मनोनित गरेको छ । एनआरएन आइसीसीको शनिबारको बैठकले २१ आइसीसी सदस्य र ५१ मानार्थ सदस्य सर्वसम्मत मनोनयन गरेको हो ।
कतारस्थित नेपाली राजदूतावासलाई त्यहाँ रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सहित चार संस्थाहरुले संयुक्त सुझावपत्र बुझाएका छन् । नेपाली समाज कतार, नेपाली जनसम्पर्क समिति कतार, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च कतार र गैरआवासीय नेपाली संघ कतारले नेपाली राजदूत समक्ष नेपाली श्रमिकहरुका समस्या तथा समसामयिक विषयहरुको विषयमा ध्यानाकर्षणसहित संयुक्त सुझावपत्र पेश गरेका हुन् । सो सुझावपत्रमा समेटिएका विषयमा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेतलाई बोधार्थ पठाइएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालय र ओमानको राष्ट्रिय संग्रहालयका बीच द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा ओमानको राष्ट्रिय संग्रहालयमा आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर भएको छ ।
अघिल्लो वर्षमात्रै महानगरीय अपराध प्रहरी महाशाखाले १ सय १७ जना महिलालाई उद्धार ग¥यो र परिवारको जिम्मा लगायो । महाशाखाका अनुसार ती महिलाहरू राम्रो कामको प्रलोभनमा पारेर बेचिन र ठगिन लागेका थिए । नेपाली महिलाहरूलाई ४ लाख रुपैयाँमा बेचेर खाडी मुलुक पु-याउने तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारले करिब दुई वर्षअघि सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगायो । जसका कारण हजारौँ महिलाहरू छुट्टीमा आएर काममा फर्किन पाएनन् । त्यसको चौतर्फि विरोध भएपछि हाल भने आंशिक रुपमा खुला गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनअनरएनए) ले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लागि संयोजकमा निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टलाई आधिकारिक रुपमा चयन गर्दै पत्र पठाएको छ ।
मिस नेपाल र एनआरएनएबीच ७ बुँदे समझदारी
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए ) र मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठबीच सात बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । एनआरएनए सचिवालयमा एक कार्यक्रमका बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।